CHP waxay weydiisay Thompson 'Haydarpasa Railway Station Hotel in la sameeyo?' | RayHaber | raillynews
[21 / 01 / 2020] Sakaryalılar Ma Doonayo Naxli Nostalgic	54 Sakarya
[21 / 01 / 2020] Mashruucu Diyaar ma u yahay Gaadiidka tareenka ee Adapazarı?	54 Sakarya
[21 / 01 / 2020] Dammaanad Gudubka Ballanqaadka Buundada Yavuz Sultan Selim ayaanay dib u Qabsan	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulCHP waxay weydiisay Thompson 'Haydarpasa Railway Station Hotel in la sameeyo?'
25 / 08 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
su’aasha ersoya haydarpasa
Kuxigeenka CHP Istanbul Gursel Tekin, Haydarpasa Railway Station oo ku saabsan eedaha Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Ersoy ayaa codsaday inuu ka jawaabo su'aasha.
Ku-xigeenka CHP Istanbul Gürsel Tekin, 'TCDD'ye Haydarpaşa Railway Station, lahaanshaha qaar ka mid ah hantida aan nooleyn ayaa keenay ajendaha Golaha. Tekin, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy oo ka jawaabaya su’aasha mooshinka ayaa ka hadlay hadalada soo socda:
'Masrax gebi ahaanba maskaxda ah'
Waxaan bartay in qaar ka mid ah waxyaabaha keydka ah ee Haydarpaşa Railway Station, oo ay iska leedahay TCDD, loo wareejiyay Wasaaradda Dhaqanka. Natiijadan wareejintaan, Guddiga Ilaalinta 5; 41-50-51-82-103 iyo 118, taariikhda magaalada ee Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa iyo nawaaxigeeda. Walaacyadayada oo dhan waxay bilaabeen go'aankan kadib.
Hawsha ugu weyn ee loo xilsaaray Guddiga Ilaalinta ayaa ah in la ilaaliyo oo la ilaaliyo aag ay ku dhawaaqday in ay tahay aag la ilaaliyo, iyo in lagu isticmaalo magaca Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska si loogu wareejiyo barxada dadweynaha in ay u noqoto ilaha caasimada. Haydarpaşa waa in loo adeegsadaa saldhigga tareenka ee ugu weyn magaalada Istanbul. Meelaha ku xeeran waa inaan lagu soo jiidan raasamaal iyo ganacsi, laakiin waa in loo istcimaalo sida cagaar iyo goobo bulsheed oo loogu talagalay isticmaalka tooska ah ee dadka, kaasoo ay Istanbul u baahan tahay, iyo rajooyinka bulshada. Haydarpaşa Gar Campus waxaa iska leh dadweynaha. Looma sameyn karo qalab dhaqdhaqaaq ganacsi.
Gürsel Tekin wuxuu ka codsaday Wasiirka Ersoy inuu ka jawaabo su'aalaha soo socda:
Maxuu yahay sababta Gudida Ilaalinta, ee u sameysay go'aankii SIT ee 1-2006, ay si lama filaan ah uga baxday go'aankaan maanta?
Aagga oo ay ku jiraan Xarunta tareenka ee 2-Haydarpaşa ayaa loo furay dhismaha; ganacsiga, dalxiiska, howlaha hoyga?
Go'aanka duminta ayaa loo sameyn doonaa dhismayaasha qaar ee ku dhex yaal aagga 3-Gar waxaana howlo cusub la siin doonaa aagaggaas oo ma la iibin doonaa Haydarpaşa dhulalka? '
Xarunta Tababarka Haydarpaşa way sii socon doontaa maaddaama hoteelku aanu ahayn dad shacab ah
Xarunta Haydarpasa Station waa hoteel?
Hotel Haydarpasa Station
Ayşen Gruda, Haydarpaşa Xarunta Tareenka
Dabka Waxaa Lagu Dayacay Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa | Xarunta tareenka ee Haydarpasa
Huteelka tareenka ee Haydarpasa